LE NTENGISO IFIHLAKELEYO YEENIKE SNEAKER KUFUNEKA IBENENJONGO - NIKE
I-Zack Snyders Iligi Yezobulungisa
Izinto esizibonileyo namhlanje: Ndijongiwe ngale Ntengiso ifihliweyo ngabom yeNike Shoes
Amaxesha aliqela kuTwitter ndibonelelwe ngesibhengezo esinqumle ubhontsi wam wokuhamba phakathi kokunyakaza. Isibonelelo sokuthengiswa sisibini se-Nike sneakers esinobundlobongela, esothusayo, kangangokuba siyasilela kuzo zonke iingcinga zokuzithengisa, kungasathethwa ke ngokunyusa okuqhubekayo okuhlawulelwayo.
Ndinyanzelekile ukuba ndigqibe kweli xesha lokuba intengiso ilahlekisa ngabom kwaye kukho ukumba izihlangu ebantwini kungenxa yengqondo ebuyayo. Andizange ndicinge ngezihlangu zakwaNike, kwaye ngoku ndicinga ngezi lonke ixesha .
Umbala omtsha onoyilo oluphakamileyo, ukuya kwiinkcukacha zokugqibela.
-Nike (@Nike) Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Matshi 2021
Ndinomdla wokungqina ukusabela kwezi zihlangu zoyikisayo (i-Women's Nike Air Max Vivas, ichanekile), njengoko ndicinga ukuba abanye banjalo, ndihlala ndicofa ukubona oko kuthethwa ngabantu nanini na xa intengiso ivela kumphako wam. Iimpawu zentengiso umphumo womlinganiselo , ngamawaka amagqabantshintshi xa kuthelekiswa neempendulo ezithandayo kunye nezinto ezithandayo (okwangoku, zingaphezulu kwe-3k izimvo, i-1k yeempendulo, kunye nokuthanda okungu-2.6k). As Dictionary.com ichaza ukufumana umlinganiso, Oku kuthetha ukuba abantu bayayichasa i-tweet kwaye bajonga umxholo wayo mbi.
Phakathi kweempendulo ezihlekisayo nezididekileyo iiteki ezivelisa kwi-Twitter, nangona kunjalo, kuhlala kukho abasebenzisi abaliqela abathi umfanekiso ulungiselelwe ukuba ungathandeki kangangoko. Ukuba ujonga izihlangu ezifanayo iyathengiswa kwiwebhusayithi kaNike , aziqhelekanga kangako — enyanisweni, zisenokude zibe zezesiqhelo!
Nabani na othathe laa foto, i-oof bajongeka beqhelekileyo kwindawo leyo. pic.twitter.com/EWj0CfyUDP
- Mimi (@mimilysong) Nge-5 ka-Meyi ka-2021
Kodwa kwintengiso, badutyulwa ngelensi zamehlo entlanzi ezigqwetha ngokungafaniyo ubungakanani bazo kwaye zibashiye bejongile, njengomntu omnye ophawulwe ngokugqibelela, njengenja eyatya inyosi ngengozi.
ijongeka ngathi yinja eyatya inyosi ngengozi pic.twitter.com/0soCebwWit
- Ukholo (@FaithgMarie) Ngomhla woku-1, 2021
Ayichasananga nawo nawaphi na amagqabantshintshi apha, kodwa sisithombe esenziwe ngelensi encinci ye-fisheye. Ngoba? Ngokufanelekileyo ukukhuthaza olu hlobo lokunxibelelana. Cofa kwikhonkco. Izihlangu azibonakali zahlukile kwinani lezihlangu esele zikho. Le imitya mibini isitayile somntwana. Zijongeka zintle i-AF
-ReeRasputin (@RasputinRee) Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi 2021
I-Nike, uphawu oludumileyo kwihlabathi lonke elinamaxabiso ezigidi zeedola ezingama-34, linokufumana ngaphezulu kweenkonzo zokufota kunye neenkonzo zentengiso. Baye, enyanisweni, badume ngentengiso yabo eyabenza baba ligama lendlu kwasekuqaleni. Ngaba zininzi izivakalisi ezaziwayo ngaphezu kokuba uyenze nje okanye iisimboli ezaziwa kwangoko kuneNike swoop? Akukho.
Kwaye ke andinakucinga ukuba nantoni na inyuselwa phantsi kwegama leNike elingakhange lenzelwe ngononophelo kwaye lavavanywa kwaye mhlawumbi nokuba lijolise kwiqela. Yiloo nto eyenza ukuba ifoto eyoyikekayo nengaqhelekanga ikhethwe kwezi zihlangu inomdla. Ngaba bekukho intlanganiso yentengiso yentengiso apho ibala lalikhona, Kulungile, bafana-hlalani nam apha-kodwa kuthekani ukuba senza izihlangu zibonakale zibi kakhulu kwimidiya yoluntu?
Ngokuqinisekileyo ngendikhethe umfanekiso ongcono wokwazisa…. Ndijonge ntoni emhlabeni? indlela yokubonisa ukuhleka
-Kelley Mitchell (@KMitchTS) Ngomhla wama-21, 2021
Okwangoku, akukho sinye isiphelo endinokufikelela kuso ngaphandle kokuba intengiso yayenzelwe ngenjongo yokufumana impendulo ecekisekayo. Kuyacekisa, enyanisweni, ukuba ugqibela ngokufunda iimpendulo ze-Twitter, ukuphinda ubhale nge-WTF (zingaphezulu kwama-900 iiTweets zoqobo, ubukhulu becala zibonisa uloyiko), kwaye ucinga ngezi zihlangu ebumnyameni bobusuku xa ndizama ukulala.
Kwithuba elibi kakhulu lokuba kwenzeke impazamo kwaye umfanekiso ombi usetyenziswe ngengozi kwintengiso, ngesele ususwe ngokukhawuleza. Endaweni yoko, ndihlala ndibona le ntengiso kwi-feed yam ye-Twitter, apho ngokuqinisekileyo inesibhengezo sentengiso esibalulekileyo esiyichithayo. I-Tweet yokuqala yenziwa ngo-Matshi kwaye isaqhubeka. Ngaba umntu ujonge iinombolo zonxibelelwano kwi-Nike HQ kunye nokusebeza, Ewe, iilensi zamehlo entlanzi, ngoku sithethayo?
Iintengiso ezilungileyo zinokuba nobukrelekrele okanye zibubudenge okanye zibonakalise abantu abadumileyo okanye bathethe amasele, kodwa kunzima kum ukuba ndikhumbule omnye umzekelo apho kubonakala ngathi imveliso ethengiswayo iboniswa ngenjongo yokukhanya. Kwaye kuya kufuneka ndiyibeke ikepusi yam kwaNike ngale. Ukuphendula ngokugculelayo nokudideka ngoku kuguqukele kwindawo apho ndizifumana ndisithi, Kuthekani ukuba bendinazo izihlangu zelensi zamehlo? Kuthekani ke ngoku?
Ukuba injongo yentengiso kukwazisa ngemveliso, oku kungaphumelela. Kwaye kusenokwenzeka ukuba uthengise iiteki, nazo, okanye ezinye izibini kwiwebhusayithi yeNike xa ucofe uloyiko.
Ayindim ndedwa ozifumana kwangaxeshanye egxothwa zizihlangu kanti futhi-kwaye.
Yiyo kanye indlela endiziva ngayo. Zimbi kakhulu kwaye ndifuna isibini. Zibukeka zintofontofo.
- DoSomething ️‍ VOTE BLUE kwaye unxibe (@ gianmaster191) Ngomhla wama-26, 2021
Ngelixa izihlangu zibagxekile abanye, banabalandeli babo abazinzileyo:
Lol fuck all yall kwiimpendulo ndinazo ezi zihlangu kwaye zezona zihlangu zikulungeleyo endikhe ndazinxiba kwaye ndifumana iitoni zokuncoma kuzo pic.twitter.com/vBLE8Rtc0p
- katie (@katiewampus_) Ngomhla wama-23, ngo-2021
Kwaye nangona oku kuyinto eqhelekileyo-
Uxolo ibestie kodwa ayisiyiyo le nto kutheni ungabuyeli kwizihlangu eziqhelekileyo ezijongwa ngumntu wonke azokuzithenga ukwenza imali eninzi
- inyoka (@ Angie0w0370) Ngomhla wama-25, 2021
- into ethile malunga neqhinga liyasebenza ngokuqinisekileyo. Esi sibini sibonakalisiwe kwintengiso, emthunzini ongabhaliswanga kakuhle njengoMnyama / Umnyama weCitron / iGrey Abyss / iPlum Dust, ithengiswa ngobukhulu bobukhulu, ngokuchaseneyo neninzi yeminye imibala iiteki ezingenayo.
Umm, KUTHENI le nto ikwi-t / l yam & KUTHENI ezi zikeyki zeNike zikhangeleka ZIWODWA ??. Ngaba yikona ??. Ngenxa yokuba olu luvo lokuthengisa luyekile ..
-Nks JaimeLee-Art (@ArtJaimelee) Ngomhla we-22 kuMeyi 2021
Ewe, ukuthengisa kuyacinywa kubonakala ngathi yinqaku , Kwaye andinakukunceda ukuba ndivuswe yiyo.
Inokuba yinto elungileyo andinakho ukuchitha iidola ezili-140 kwiziteki kwaye ndinenyameko eyomeleleyo Izenzo zabasebenzi bakaNike . Kwenye indalo ndinokuphela ndingumnikazi wezihlangu zamehlo entlanzi kuba intengiso iyothusa kakhulu. Masithathe uhambo ngezinye zeempendulo ezoyikisayo, ezinomsindo, ezihlekisayo, kunye nesiphithiphithi xa sisonke esi sibhengezo esingaqhelekanga esizise emhlabeni.
UJimmy angatsiba, ngoku uJenny naye unakho. pic.twitter.com/8dOmyG9cZz
- (@PentUpPower) Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 2021
Ndingaphezulu kweminyaka engama-60 ubudala, kwaye ezi zezona zihlangu ZI-UGLIEST endakha ndazibona ebomini bam!
-U-Gloria Ledesma (@gledesma) Ngomhla we-22 kuMeyi 2021
Nike unayo le ntengiso ukusukela ngoMatshi
Funda igumbi. Uneqela lokugxila simahla apha ongalihoyi.
-Umiselwe kwakhona umntwana ocacileyo (@ NotoriousRED2) Ngomhla wama-21, 2021
Ezo zinto zifihlakele… uyayikhumbula ikhathuni uDoug? Umhlobo wayenyathela nzulu kuPatty Mayonnaise ngala malungu kwiikhocks zakhe !! .️
-Ophelia Mensah (@ Ophelia87861079) Ngomhla wama-21, 2021
Kubi. Imbi kakhulu. Andizange ndibazi abesifazana abafuna ukunxiba izonka ezinyaweni zakhe.
- KP (@ renka9903) Meyi 9, 2021
Ngaba uyazama ukuphinda wenze ii-90s zeNickelodeon Moon Shoes pic.twitter.com/XxbeUB2dvu
-ASR (@spinspinnsuga) Epreli 3, 2021
Uyazi ndicinga ukuba kwakukhe kwakho urhwebo lokwenza izihlangu kweli lizwe. Endaweni yokuthenga izihlangu ezibalekayo ezenziwe ngamakhoboka. https://t.co/Kpqocq8MlK
- Ash (@ Ash49204913) Epreli 16, 2021
Ukuba umntu undithengele ipere njengesipho ndingacinga ukuba bayandicaphukela.
-Lynne Pena (@ LynnePena75) Epreli 29, 2021
Esi sihlangu sijongeka ngathi sifuna ukuthatha iBenadryl.
- Ny (@nyhasfun) Ngomhla we-24 kuMeyi 2021
steven kwindalo enzulu kakhulu
-Miss Bossy Boots unxibe imaski (@MissBossyBoots_) Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 2021
Isibhengezo siye saqhuba amanye amanani oluntu ukuba abuze ukuba ngaba iiteki zikhona ngenene. Ndiyakuqinisekisa nkosikazi, bayayenza.
Ngaba oku kuyinyani?
-Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) Ngomhla wamashumi amabini ku-Matshi 2021
Zinyani, azimangalisi, kwaye ziyandikhathaza mihla le. Kwaye okwangoku, andinakuthatha eli nyathelo lokugqibela:
Ndizokuyibhloka le ntengiso kuba andinakujonga kweso sihlangu siphambeneyo esingaqhelekanga ngomnye umzuzu.
-Cherry Jo Chicago - (@ PeggyCher63) Ngomhla wama-25, 2021
Imfihlelo yesi sibhengezo yoyikekayo ebonakala ngathi yoyikeka indizisela umtsalane kakhulu kunye nomtsalane. Ngamana ezi ntlanzi-iliso eligqwethekileyo, izihlangu ezinyosiweyo zihlala ngonaphakade kumgca wam wexesha.
(imifanekiso: Twitter, Nike)
Ngaba ufuna amanye amabali anje? Yiba ngumrhumo kwaye uxhase isiza !
- UMary Sue unomgaqo-nkqubo ongqongqo iyakwalela, kodwa ayikhawulelwanga, ukuthukwa kwakho nabani na , Intiyo nentetho egonyamelayo. —
Izinto Zasemzini 3
Eyona Nto Ithengwayo
weirdmageddon inxenye 2 womxhuzulane ukuwa
Isipho umonakalisi wemovie
Kulungile nam okuhlekisayo
kwenzeke ntoni ku-jihawg ammo
eowyn kwinkosi yamakhonkco